न्यूयोर्कमा एक वृद्ध व्यक्तिमाथि प्रहरीले यस्तो सम्म गर्यो, सर्वत्र आलोचना ! [भिडियो सहित] - Bigul News
न्यूयोर्क – संयुक्तराज्य अमेरिकामा एक अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोयडको मृ-त्युको विषयलाई लिएर देशव्यापी आन्दोलन चलिरहँदा न्यूयोर्क प्रहरीले बिहीबारको प्रदर्शनमा सहभागी एक वृद्धमाथि गरेको दुव्र्य-वहारलाई लिएर प्रहरीको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ ।
पश्चिम न्यूयोर्कका मेयरले वृद्ध व्यक्तिमाथि भएको व्यवहारबाट आफू अत्यन्त दुःखित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । न्यूयोर्कको एक अस्पतालमा उपचार गराइरहेका ती वृद्ध व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था “स्थिर” रहेको बताइएको छ ।
न्यूयोर्कका गभर्नर एन्ड्रु कुमोले वृद्ध व्यक्तिमाथि दुव्र्य-वहार गर्ने प्रहरी अधिकारीको निलम्बनलाई स्वीकृत गरेका छन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, जेठ २३, २०७७१२:३६
आरडिटीका भरमा पर्दाको परिणाम: घर पुगेपछि कोरोनाको पुष्टि, कसैको घरको ओच्छ्यानमा मृत्यु !
९ घण्टा अगाडि BNCOM
११ घण्टा अगाडि RT